Umhlobo wabayili, uncediso olukhulu lwe-3D yoluntu-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Umhlobo wabayili, uncediso olukhulu lwe-3D yoluntu
Le ngenye yezicombululo ezinikezwa yi-Eagle Point, inkampani efanayo eyaqala ekuqaleni kweminyaka engama-90 yathintela yonke into eyenziwa yi-AutoCAD. Emva kokunyamalala okuncinane apho wayefuna ukuba ubunikele phantse yonke into inkampani ubuyela injongo yayo yokuqala, ngoko AutoDesk yaye ezinye fun izicelo zobunjineli, ngezakhiwo kunye nolwakhiwo, ngoku yimani Revit baseKuhlaleni 3D
Companion ezakhiwe ngayo lula uphumezo imisebenzi inokwenziwa kunye AutoDesk Civil 3D, kodwa automated wasebenza ezimbalwa, masenze umzekelo ubuncinane enye:
Sivele sinomhlaba, kunye nemigca yecala kunye nento esiyifunayo kukuba:
Ukuyila indlela efanelekileyo yeemitha ze-8 kunye nomda we-curved 65 wamitha.
Yila amaqashiso ekunene kunye nenqobo leemitha ezingama-400.
Yenza inkampu ngakwesobunxele ngemigangatho yeemitha ezi-square ze-600.
Ekubeni isitalato singenakuphuma, ekugqibeleni sifuna ukubeka ibuyiselo, kwalabo baziwa ngokuba i-cul-de-sac, eziqhelekileyo ukuphepha ukhuseleko kunye nengxolo kwiindawo zokuhlala.
Ewe, umele uhambe kwithebhu Companion Companion, khetha ukhetho Dweba iSitalato, gcwalisa iiparitha kwaye oku kuza kuphakamisa iphaneli ye-Civil 3D ukudala ukulungelelaniswa.
Sizoba i-axis yesitalato kunye ne-voila, siza kuba nokwahlulahlula kwisicwangciso, kunye neeploti ezenzelwe imeko kunye ne-centroid yayo enxulunyaniswe nendawo yayo kunye nenombolo yeqashiso, ukugcina indawo esiyisekileyo. Kwakhona iprofayili kolunye umbono, kunye nezikhululo kunye nokuphakama okulingana nesityalo.
Ngoku, ukwenza ukuphela kwesitalato kungekho ndlela yokuphuma, kufuneka sikhethe Beka i-cul-de-sac, ke ukhethe ukuba oku kuya esikhungweni, ngasekhohlo okanye ngakwesokudla, umda wokukhawuleka kunye nomlinganiselo wendawo kwiindawo ezijikelezayo.
Kwaye yile nto, silapha.
Akungabazeki ukuba konke oku kwenziwayo AutoDesk Civil 3D, Kodwa ukuba sithelekisa inani lamanyathelo okwenza ulungelelwaniso, emva koko yenza iprofayili, wenze iziza kunye ne-cul-de-sac. Ugcino lubalulekile.
Ngaphaya koko, ukuba sifuna ukwenza utshintsho. Umzekelo, ukuhambisa i-axis yesitalato kwindawo, yonke into ihlaziywa kubhabho, ukugcina iikhrayitheriya.
Umhlobo kaDesinger. Yenza lula umsebenzi woyilo nge-AutoCAD Civil 3D kokubini ekubhaleni nasekunikeni ingxelo ekudaleni indawo, ulungelelwaniso, izitrato, amacandelo eminqamlezo, iipasile, ukusika / ukugcwalisa ivolumu, kunye neenkqubo zombhobho.
Ngamafutshane, uMdlelwane weMyili ngumsebenzi esiwenzayo kunye ne-Civil 3D, elula kwiindlela eziqhelekileyo zabaqulunqi.
Nangona mna zishwankathelwe isicelo iziza eguquguqukayo enxulumene umgca kwiziko taxiway, kukho ezinye iimpawu kwezinye izinto, ezifana ngokubeka umbhobho yabucala owongozelelweyo nokokuba ilungiselelwe ngokupheleleyo eguquguqukayo yokupaka yoyilo yomnatha kwi ukuhlala kwimizi, ukudala i-polyline 3D enxulumene nomhlaba ukususela kumanqampu, kunye nokunye.
Nakhelwe phezu interface entsha, sicingela ukuba asisayi kuba neengxaki wokuhambelana uguqulelo 2012 Civil 3D uya kubona kungekudala kulo nyaka. Kule vidiyo unokubona intuitive ye sixhobo, kunye nefestile encinane efanayo, kodwa kuphela kwi-Civil 3D.
Yiya kwiBoner Companion
Yiya Eagle Point
Yiya kwi-Civil 3D
IHonduras: Emuva kwintlekele, imfazwe yamakhaya iphinda ikhethe